Myanmar Best IDD Rates with Prepaid LiVE™ | Digi - Let's Inspire
Raja Video ဖြင့်
YouTube အတွက် အခမဲ့ 10GB ဖြင့် သင့်အကြိုက် ဗီဒီယိုများကိုကြည့်ပါ + Digi Prepaid LiVE မှ6Buddyz သို့ အခမဲ့ 10000 မိနစ်!
အကန့် သတ်မရှိ YOUTUBE & FACEBOOK
+30 မိနစ် IDD
(အကန့် အသတ်မဲ့& )
30 IDD မိနစ်
သို့ မဟုတ် *188*1#
ရက် 30 အတွင်းသ
သို့မဟုတ် *188*3# သို့ ခေါ်ပါ
သို့မဟုတ် *188*2# သို့ ခေါ်ပါ
သို့မဟုတ် *116*3*6# သို ခေါ်ပါ
မည်ကဲ့ သို့ ယူရမည်နည်း
အခမဲ့လက်ဆောင်
မည်သည် အစီအစဉ်တွင် မဆို သုံးနိင်သည်
1 ရက်အတွင်းသာ အသုံးပြုနိင်သည်
အခမဲ့လက်ဆောင် များ အသုံးပြုနိင်ရန် *888*1#
ရှ့မှာ ပိုမိုကောင်းမွန်တဲ့ နှုန်းထားများက သင့်အတွက် ရှိနေပါတယ်!
သင်လိုအပ်သော အင်တာနက်အားလုံးအတွက် RM1 မှစတင်သော ပါဝါမြင့် အင်တာနက် အမျိုးအစားများဖြင့် စိတ်ကြိုက်သုံးစွဲပါ! ဈေးနှုန်းသက်သာပြီး ကိုတာများများရတဲ့ အဲ့ဒီ အင်တာနက်များကို အချိန်မရွေး ရယူပါ။
Internet Cili Padi အချိန်ပိုင်း သုံးစွဲခွင့်
ဘယ်အချိန်ဖြစ်ဖြစ် သင်လိုအပ်သော အင်တာနက်အားလုံးကို ရယူပါ
2 နာရီ သက်တမ်း
သို့မဟုတ် ခေါ်ဆိုရန် *116*3#
6 နာရီ သက်တမ်း
24 နာရီ သက်တမ်း
Internet Cili Padi App သုံးစွဲခွင့်
သက်နှစ်သက်တဲ့ အပလီကေးရှင်းများကိုသုံးဖို့ အကန့်အသတ်မဲ့အင်တာနက်
Internet Cili Padi အပိုဆု သုံးစွဲခွင့်
အာတ နက် + ဖုန်းခေါ်ခြင်း
ရက်7သက်တမ်း ရှိပါသည်
12 နာရီ အကန့်အသတ်မဲ့ အင်တာနက်1
(နံနက် 12- ည 12)
24 နာရီ အကန့်အသတ်မဲ့ ခေါ်ဆိုမှုများ
ရက် 30 သက်တမ်း ရှိပါသည်
နေ့စဉ် နေ့ခင်း 1 - ည7နာရီ အတွင်း 2GB
နေ့စဉ် နေ့ခင်း 1 - ည7နာရီ အတွင်း 1GB
ရက်7သက်တမ်းရှိပါသည်
အင်တာနက်နှင့် ဖုန်းခေါ်ဆိုခြင်း အမျိုးအစားများ
7 ရက်စာအတွက် RM5 နှင့် အင်တာနက် 300MB ကြိုတင်ထည့်ထားပါသည်
(5 ရက် သက်တမ်းရှိပါသည်)
6 Buddyz သို့ 1,000 မိနစ် ဖုန်းခေါ်ခြင်း
နှင့် 1,000 sms
အမြန်တမ်း အွန်လိုင်းသုံးဖို့ အခမဲ့
အသံ & SMS (လိုင်းအားလုံး)
/60 စက္ကန့် ခေါ်ဆိုမှု
အသဈကကွိုတငျငှဖွေညျ့စာရငျးပေးသှငျးမှုမြားအတှကျမှတျပုံတငျရနျအနီးဆုံးအခှငျ့အာဏာပှဲစားသို့မဟုတျ Digi Store ကိုသှားရောကျကွညျ့ရှု။
IDD VIP ဖြင့် သင့်စိတ်ကြိုက် နံပါတ်တစ်ခုသို့ အသက်သာဆုံး တိုက်ရိုက်ခေါ် IDD နှုန်းထားများ
သင့်ရဲ့ VIP နံပါတ်သို့ အသက်သာဆုံး တိုက်ရိုက်ခေါ် IDD နှုန်းထားကို ရယူပျော်ရွှင်ဖို့ အောက်ဖော်ပြပါ ရိုးရှင်းတဲ့အဆင့်များအတိုင်း လုပ်ဆောင်ပါ-
အဆင့် 1: IDD VIP ကို စတင်ပါ
*128*1*3# ကို ခေါ်ဆိုပြီး IDD VIP
အဆင့် 2: IDD VIP နံပါတ်ကို စာရင်းသွင်းပါ
*128*1*8# ကို ခေါ်ဆိုပြီး IDD VIP ကိုရွေးပါ
IDD VIP ကို ထည့်ပြီး အသက်သာဆုံး တိုက်ရိုက်ခေါ် IDD နှုန်းထားကို ရယူပျော်ရွှင်ပါ
မှတ်ချက်- VIP နံပါတ်ကို ယခုပုံစံဖြင့် စာရင်းသွင်းပါ <နိုင်ငံကုဒ်><ဖုန်းနံပါတ်>
ဥပမာ- သင့်စိတ်ကြိုက် VIP နံပါတ်သို့ အသက်သာဆုံး တိုက်ရိုက်ခေါ် IDD နှုန်းထားများ ရယူပျော်ရွှင်ရန် 6281xxxxxxxxx
Digi Prepaid LiVE ဖြင့် မြန်မာပြည် သို့ ပုံမှန်ခေါ်ဆိုမှုများကို RM1.20/မိနစ် ကျသင့်ပါမည်။
WOW! အင်တာနက်ကူပွန် ရဖို့ အောက်ပါနည်းလမ်းများကို လိုက်နာပါ
*123*<ပင်နံပတ် - ၁၆ ခု># ကိုနိပ်ပါ
ရွေးယူဖို့ အတ *888*3# ကိုနိပ်ပါ
သင်နှစ်သက်ရာ အစုကို ရွေးပါး
1GB ( အခမဲ့RM12 IDD ခရစ်ဒစ် ) အသစ်
2GB ( အခမဲ့ RM7 IDD ခရစ်ဒစ် )
3GB ( အခမဲ့ RM6 IDD ခရစ်ဒစ် ) အသစ်
၍အရာများကို အနီးဆုံးမှာရှိတဲ့Digi ဆိုင် (သို့ ) *188# ကိုနိပ်ပြီး စတိုးဆိုင်ကို ရှာလိုက်ပါ